News Collection: प्रेम प्रस्तावका शैली अनेक
प्रेम प्रस्तावका शैली अनेक
हिन्दी फिल्मको सोलेमा वीरु (धर्मेन्द्र) वसन्ती -हेमा मालिनी)लाई मनाउन ट्याङ्कीमाथि चढेर गरेको प्रस्ताव निकै प्रसिद्ध छ ।
तर, बेइजिङकी एक युवतीले आफूलाई मन पर्ने पुरुषलाई अनौठो शैलीमा प्रेम प्रस्ताव राखेकी छन् । युयान युनिभर्सिटीकी छात्राले त्यही अध्ययन गरिरहेका अर्काे छात्रलाई कारमाथि चढेर प्रेम प्रस्ताव राखेकी हुन् । उनी हातभरि फूल र मसँग बिहे गर्ने ? बोर्ड लिएर कारमाथि चढि्न र आफूलाई मनपर्ने पुरुषलाई प्रेम प्रस्ताव राखिन् । उनको यो शैली देखेर त्यहाँ मानिसको भीड जम्मा भयो । उनको यो शैलीले मानिस दंग परे पनि उनलाई मन पर्ने पुरुषलाई केही फरक परेन ।
उसले प्रसतावलाई अस्वीकार गर्दै भन्यो, 'प्रेम प्रस्ताव राख्ने काम मेरो थियो । तिम्रो यो शैली मलाई मन परेन ।'
म तिम्रो चाहना पूरा गर्न सक्दिनँ । मसँग घर पनि छैन गाडी पनि छैन । जब यी दुवै हुनेछ म बिहेका लागि तयार छु । तिमी मलाई तीन वर्ष कुर्न सक्छौ ?
बेन्जामिन फ्रेकंलिन वैज्ञानिक भए पनि उनी आफूलाई भौतिकवादको अन्धताभन्दा आध्यात्मिक आस्थामा प्रकट गर्थे । यसै प्रसंगमा एकदिन साथीभाइको एक जमघटमा साथीहरूले उनको व्यक्तित्व र आस्थाका अलग-अलग पक्षमा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरे । साथीहरूको मनभित्रको खुल्दुलीलाई मेटाउन स्वीकार गर्दै फ्रेकंलिनले गम्भीरतापूर्वक भने, 'साथी हो, मानिसले भौतिक रूपको सुखसयलमा अन्धो हुने होइन । मानिसले मानिसलाई सेवा र भलो हुने काममा आफूलाई लगाउनुपर्छ । भगवान्ले सबैतिर देख्छन् र पाप कर्म गरियो भने ढिलो-चाँडो उनले सबैलाई दण्ड दिएरै छाड्छन् भन्ने डरको ठाउँ राखियो भने मानिसले कुकर्म, अनैतिक, भ्रष्ट र अनुशासनहीन तथा पतित र नीच मानिने कर्म गर्न सक्दैन ।' यही कुरालाई अझ स्पष्ट पार्न उनले आफैँले आविष्कार गरेका कुरालाई जोड्दै भने, 'मैले पत्ता लगाएका विज्ञानका कुरा ध्वंसात्मक नभएर जनहितका लागि मात्रै छन् ।
फ्रेकंलिनले भन्दै गए, 'दुनियाँमा पैसा सबै कुरा होइन । पैसा त एउटा साधन मात्रै हो । आफूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति भए हुन्छ । पैसाको लालची बन्न थालियो भने त्यसलाई चिन्ता र औडाहाले घेरेर असन्तोषी र रोगी बनाइदिन्छ । संसारमा हामी केबल पात्र मात्र हाँै । जन्मिँदा हामी सबै नांगै जन्मिन्छौँ । जन्मिँदा कसैले कुनै लोभलालच लिएर जन्मिएको हुँदैन र मर्दा पनि रित्तै हात लिएर जान्छ, तर ठूलो हुँदै गएपछि मानिसलाई लालचले छोप्तै जान्छ ।' उनले अगाडि भने, 'पैसाले दाजुभाइमा शत्रुता जन्माउँछ । तेरो र मेरोको नाममा पौंठेजोरी खेल्दै फुर्ती देखाउन पछि पर्दैन । तर, मलाई मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ भनेर फुर्ती देखाई तुजुक, घमन्ड गर्ने कुनै पनि व्यक्ति देखाइदिनुहोस्, जसले मरेपछि त्यो सम्पत्ति पनि साथै लान सकेको होस् । त्यसैले मानिसले यो संसारलाई एक नाट्यशाला मान्नुपर्छ । म त्यसको एउटा सूक्ष्म पात्र हुँ । मैले अहंकार, घमण्ड, तुजुक गर्नुको सट्टा सतकर्म गरे मात्रै मानवजीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।'
अर्को जुत्ता ?
एकपटक लुथर किंग एक सार्वजनिक सभामा भाषण दिँदै थिए । एकजना प्रतिक्रियावादी श्रोताले उनलाई मञ्चमा जुत्ताले हिर्कायो । यस घटनाले सभामा हलचल मच्चियो । सभाका आयोजक लाजले राता भए । तर, लुथर किंग अविचलित भई मञ्चमा उभिइरहे ।
उनले सो जुत्तालाई बडो प्रेमपूर्वक उठाए र स्नेहपूर्वक मीठो वचनले भने, 'धन्य छ त्यो देश, जहाँका मानिसलाई आफ्नो सेवकहरूको यस्तो ध्यान छ । मजस्तो पैदल हिँड्ने व्यक्तिलाई कुनै कृपालु सज्जनले बडो उदारताको परिचय दिनुभएको छ । तर, खेद यस मानेमा छ कि यो जुत्ता सिर्फ एउटा गोडाका लागि मात्र छ ।'
केहीबेर रोकिएर उनले पुनः भने, 'कृपालु सज्जनसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कृपया दोस्रो जुत्ता पनि मलाई दिनुहोस् । यसो गर्नुभएको खण्डमा म उहाँप्रति साँच्चिकै आभारी हुने थिएँ ।'
मार्टिन लुथर किंगको मुखबाट यस्तो वचन सुनेपछि उपस्थित सबै श्रोता स्तब्ध भए र मार्टिन लुथर किंगको जयजयकारले सभास्थल गुञ्जायमान भयो । लुथर किंगको अनुहारमा चिरपरिचित मुस्कान देखा पर्‍यो